Nkwupụta nke ndị ahịa SEO | Martech Zone
Nkwupụta nke ndị na-ere ahịa SEO
Wenezde, August 13, 2014 Fraịde, Ọgọstụ 26, 2016 Kieran Wilson
Ihe ochicho njini ka bu otu ahia ahia, o nwere ike buru ihe mgbagwoju anya ma mekwaa ya ka ogba ugbo ala di na New York City. E nwere ọtụtụ mmadụ na-ekwu okwu ma na-ede banyere SEO na ọtụtụ na-emegide onwe ha. Agakwuuru m ndị nkwado kachasị na obodo Moz wee jụọ ha otu ajụjụ atọ a:
Kedu SEO ụzọ na onye ọ bụla hụrụ n'anya abaghị uru?
Kedu usoro aghụghọ SEO chere na ọ bara uru n'ezie?
Ka ọ dị ugbu a, kedu akụkọ ifo SEO kachasị?
Ọtụtụ isiokwu pụtara ìhè ma enwere esemokwu n'etiti ndị ọkachamara, yabụ m ga-ahapụ gị ka ị chọpụta nkwubi okwu gị, nke m nwere olile anya na ị ga-ekere òkè na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.
Echere m na SEO ụwa aghọọla ọkaibe n'oge. E nwere usoro dị ole na ole nke ọtụtụ ubi na-abaghị uru. Nke ahụ kwuru, echere m na otu ụzọ aghụghọ nke chọrọ ịnwụ bụ enweghị atụ, ịjụ oyi maka blogging ọbịa. Imirikiti arịrịọ ndị a emeghị nke ọma ma ana m eche na mgbe ha nwetara nzaghachi, ọ na-abụkarị site na saịtị ndị ị na-achọghị ịbụ ndị ọbịa. Azụzụ Randkin, Moz
Ụlọ njikọ. Ọ bụụrụ m nzuzu mgbe niile iji nọrọkwuo oge na njikọ ụlọ njikọta wee mepụta ọdịnaya na mbụ. Ekwuru m mgbe ọ bụla na ọ dị ka ịkwanye ugwu gburugburu. Ọ gbalịsie ike na ọ ga-arị ugwu ahụ, ma ike ndọda ga na-edowe ya oge niile. Mee ka ihu akwụkwọ gị dị mma karịa ibe ọ bụla ọzọ na web maka otu isiokwu ahụ, ma ọ bụ ebipụta ya. Na-arụ ọrụ mgbe niile. Enweghi ike imepụta ihe okike na-esote. Patrick Sexton, Na-enye Bot
Ọ dị ihe ole na ole na-abaghị uru ọ bụla; ihe niile nwere ebe. Site na nke ahụ, na-agbakwunye saịtị gị na a nnukwu ndekọ akpọ PR6links4U.biz ugbu a agafeghị uru na-abaghị uru na mpaghara dị ize ndụ. Obi ruru m ala na-adụ ndị mmadụ ọdụ ka ha tinye saịtị ha na ndekọ ọ bụla nke na-ahapụ onye ọ bụla tinye ozi nke aka ya n’enweghị oke. Phil Buckley, Curagami
Akwụkwọ nchịkọta akwụkwọ. Agaghị m emetụ nke a na osisi osisi ugbu a, kama ọ bụ naanị ebe njikọ ụlọ metụtara. Enwere uru dị na nke a, mana ndị mmadụ chọrọ ịpụ n'echiche na nke a abụghịzi ụzọ iji nweta njikọ. Andy Drinkwater, iQ SEO
Onwe m, echere m na ahịa ahịa bụ ihe na-abaghị uru - mgbe ejiri ya n'onwe ya (hey look, a cop-out answer). M na-ahụ ọtụtụ ndị na-anabata "wuo ya ma ha ga - abịa" na - abịakwute ọdịnaya, nke ha na - etinye ọdịnaya ebe ahụ wee nọrọ ọdụ n'ịnyịnya ibu ha na - atụ anya njikọ, mbak na nsonaazụ. Ọ naghị arụ ọrụ otu ahụ. Kwesiri ịdị na-arụsi ọrụ ike na otu ị si azụ ahịa ọdịnaya gị na ọfụma, tupu ị mepụta ọdịnaya ahụ, ị ​​kwesịrị itinye nyocha ahụ na ịchọta ọ bụghị naanị echiche ọdịnaya nwere ike ị ga-enwe, mana ụzọ ị ga-esi bipụta akwụkwọ. Otu n'ime ahia ahia kacha mma m huru n'ime afọ ndị a bụ Ntuziaka Ndị Nleba Ndị Ahịa na-enyefe hacking Google News, na-enye gị ezigbo nduzi na ịchọta ndị edemede kpuchiela isiokwu gị n'oge gara aga ma nwee ike ịchọrọ ịme ya ọzọ. Ọ bụrụ n ’ijikọ ire ahịa ọdịnaya yana nyocha dabara adaba, ọ nwere ike ghara ịbụ ihe na-abaghị uru gaa ọghọm. Tom Roberts
M ga-asị na Meta Keywords nwere ike ịbụ ntakịrị uru. Fọdụ webmasters ka na-ahụ spam adịgboroja a. Maka Bing ha nwere ike ị nweta uru mana maka Google, m ga - ekwu oke uru. James Norquay, Ọganihu Media
Ọtụtụ mmadụ na-awụlikwa elu na ọhụrụ SEO tactic, na agbanyeghị ihe ọ bụ naanị n'ihi na a na-ekwu maka ya ọtụtụ, mana n'echeghị echiche banyere ya na ọnọdụ nke saịtị na akara ha na-arụ ọrụ. Digital PR nwere ike ịdị irè karịa ụfọdụ niche karịa ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ. Ndụmọdụ m bụ mgbe niile na-ele anya na niile kwere omume si eme ibido ma mgbe ahụ na-agbada ala dabere na nloghachi nke ịghaghachi na itinye ego na niche ahụ. Simon Penson, Zazzle
Agaghị m ekwu nke ahụ rel = onye edemede abaghị uru, ọ dịka ọ ga-aba nnukwu uru n’ọdịnihu, mana echere m na ọ bụghị isi ihe dị n’oge a. Ugbu a bụ oge iji wuo ntọala ahụ, oge erubeghị ka ị hụ nsonaazụ. Danny Dover, Lifelisted.com
Ọtụtụ SEO na-eleghara ime ihe na-eme ka ha nweta njikọ nofollow, mana ekwenyere m na enwere nnukwu uru na nofollow njikọ nke ahụ nwere ike izipu okporo ụzọ ruru eru. Azụzụ Randkin, Moz
Amaghị m nke ahụ controversial bu adjective kwesiri ekwusi ya ma ezipụ ndị ọbịa N'ezie, ọ bụ mpaghara nke, Google na ndị ọzọ amabeghị ihu na ihu ya. N'ikwu eziokwu, okwu a abụghị site na nzipu ozi ndị ọbịa, nke m bụ nka nke imepụta na ịkekọrịta oke ọdịnaya na saịtị dị mkpa, mana kama usoro "spammy" nke naanị ejiri akara otu moniker. Ọ bụ mgbe niile ka ịmepụta ọdịnaya dị ọnụ ala, nke a na-apụghị ịgụta agụta na ịkwụ ụgwọ saịtị adịghị mma iji tinye ya na njikọ ya bụ omume adịghị mma ma kwesịrị ịkwụsị ya, mana nke ahụ abụghị izipu ndị ọbịa, nke ahụ bụ spam. Simon Penson, Zazzle
Ịde blọgụ ndị ọbịa. O doro anya na, site na ụdị ụlọ ọhụụ na ọhụụ ọhụụ ọ dịghị ihe ka mma. Ọ bụrụ na ihe kpatara ị na-eme ya bụ naanị maka njikọ ahụ, echegbula, mana ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ịkụziri ma nwee obi ụtọ ndị na - agụ akwụkwọ mgbe ahụ ị ga - ahụ nsonaazụ azụmaahịa dị mma. Phil Buckley, Curagami
Enwere ọtụtụ ebe a, yabụ m na-ahọrọ nke nwere ndị mmadụ nọ ọdụ n'akụkụ abụọ nke ngere ahụ - yana ụfọdụ na ya! Peeji Ogo Ọkpụkpụ bụ otu n'ime mpaghara ndị nwere mmetụta agwakọtara n'etiti ndị nọ na teknụzụ SEO nka. Agbanyeghị, a ga-edozi nke a nke ọma n'ihi na ịchọghị ịkwụsị nsogbu mgbe Googlebot bịara ileta. Nweta ya ziri ezi, ma enwere uru ọ bụla a ga-enweta. Andy Drinkwater, iQ SEO
Ekwesịrị m ikwu ezipụ ndị ọbịa, ọ bụ otu n'ime ụzọ kachasị baa uru iji nweta akara gị na nkwupụta n'ihu onye buru ibu ma ọ bụ ndị na-ege ntị ọzọ ị nwere. Ka m na-arụ ọrụ maka onye mbipụta akwụkwọ, ana m enwekarị ndị ọbịa na-ezisa echiche na / ma ọ bụ ọkwa. Ikwesiri iweta egwuregwu 'A' gị, ma ọ bụ opekata mpe. Martijn Scheijbeler, Weebụ Ọzọ
Eziokwu, usoro niile a na-akpọ dị ka okpu-okpu, ọ bụrụ na okpu bụ ihe gị, nwere ụfọdụ uru nke uru. Ewezuga nke iwu na-akwadoghị (ndị na-erigbu ngwa ngwa Joomla, m na-ele gị anya), ị nwere ike - ma kwesịrị-ahụ uru nke usoro ahụ niile, ma ọ bụrụ na netwọkụ blog, njikọ njikọ, redirects ma ọ bụ ezigbo spam ochie . Ihe kpatara na ụfọdụ SEO ka jiri usoro ndị a bụ n'ihi na ha ka na-arụ ọrụ. Ha ka na-enweta ego ha na enweta. O doro anya, saịtị ndị ahụ ga-emecha taa gị ahụhụ ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ mmefu ego gị na nloghachi gị na itinye ego, ị ka nwere ike ị nweta uru.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eche echiche iwu otu ika na ịkwalite weebụsaịtị ahụ ma chọọ iji usoro dịka ndị a, ekwesịrị ịgbanye gị. Ọ bụrụ na ị chere na ị nwere ike itinye ihe egwu dị na ntaneti gị site na iji ụzọ SEO nwere ike ịhụ gị ntaramahụhụ na deindexed, ị ga-apụ na egwuregwu SEO kpamkpam. I bu onye nzuzu, i jọrọ njọ ma i nweghi ndi enyi. Kama nke ahụ, kewapụta ule ahụ ma mepụta ya na saịtị dị iche iche na ikekwe na otu isiokwu isiokwu dị iche kpamkpam. Tinye ụzọ ụfọdụ iji nwalee. Tụọ ụgwọ, ọkwa, okporo ụzọ na ụzọ. Ego ole ka itinye ego? Ego ole? Ọ bara uru?
Were ya dị ka ngalaba R&D - dịka ndị na - ere ahịa, anyị ji ụlọ ọrụ anyị ụgwọ inyocha ụzọ ọ bụla enwere ike ị nweta ego. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ n'ime ụzọ ndị ọzọ a nwere ike ime nke ahụ. Ma obu ha agaghi enwe ego. Ma ọ bụ ha nwere ike ịda kpamkpam. Isi ihe bụ ịnwale ma hụ ihe ga-abara gị uru. Bibie ihe mmado na preconcepts na-aga na data. Tom Roberts
Ọ bụ ezie na ọ bụ naanị mkparịta ụka na-arụrịta ụka, ekwere m Kpọmkwem egwuregwu ngalaba (EMD's) na ngalaba egwuregwu ele mmadụ anya n'ihu nwere uru SEO bara. Nke a apụtaghị na ị nweghị ike ibute onye nwere EMD n’ihu ma ọ bụrụ na ịnweghị. Ọ pụtara na enwere uru ọ bara ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnweta EMD ma ọ bụ PMD. Robert Fisher, Onye isi ala, ịkpa ahịa MarketingATAT
M ga-ekwu na webmasters na-ewu ama esịn ngalaba na ịtụgharị ha na saịtị mmekọ, ọ bụ atụmatụ na-arụ ọrụ, ọ bụrụ na profaịlụ njikọ ahụ dị ọcha. Ma mgbe webmasters na-atụle ya na nnukwu ogo Google nwere ike ihichapụ ya ma ị hụ nke a na-eme oge na oge ọzọ. Ma, ị na-enwe mmetụta maka ndị mmekọ ahụ na-achọ ịkpata ụfọdụ ego. James Norquay, Onye na-ahụ maka ndị ndụmọdụ, Media Prosperity
Ọ na-amalite ịdị ka Adwords na-emefu na-enwe mmetụta na organic. Echeghị m na ejikọtara ya ọnụ mana ọ pụtara site na dataset m na enwere njikọ. Nke a dị iche na ọbụlagodi otu afọ gara aga mgbe mmekọrịta ahụ edoghị anya. Ka Google na-amalite inwekwu nrụgide site na ndị dike mgbasa ozi mmekọrịta, ọ bụ ihe ezi uche dị na ha ga-atọghe amụma nke ha gbasara mgbidi ngalaba ngalaba. Danny Dover, Lifelisted.com
Enwere ọtụtụ akụkọ ifo na ụlọ ahụ ezi, ọdịnaya pụrụ iche kwesịrị ịdị mma iji nweta ọkwa. Nke ahụ abụbeghị kemgbe ogologo oge, yana ọfụma ka ị na-akpụ akpụ na ndenye aha apụtaghị na ọ dị mma ịkwado ọkwa. Ọ bụrụ na ị naghị emepụta nsonaazụ kacha mma na 10 kachasị elu, gịnị kpatara Google ga - eji bulie gị? Azụzụ Randkin, Moz
na ọbịa ikenye bụ nwụrụ anwụ! Nakwa na SEO dị na ụzọ ọpụpụ ya. Iwuli ndi mmadu bara uru site na nyocha ndi mmadu adighi aga agha n'oge obula ma oburu na SEO bu ihe SEO na eme ebe a ka o noo. Usoro ndị achọrọ iji merie nwere ike ịgụnye ọzụzụ ndị ọzọ ugbu a mana akụrụngwa ka dị mkpa dị ka ọ bụla na-abawanye ROI site na ọwa. Simon Penson, Zazzle
Akụkọ SEO kachasị na isi m bụ na SEO dị irè karịa imewe na ịba uru. SEO bụ obere akụkụ nke ihe na-eme ka saịtị rụọ ọrụ, ọ bụghị akụkụ buru ibu. Patrick Sexton, Na-enye Bot
Mgbe mmadụ kwuru 'SEO saịtị m' ihe atụgharịrị gaa bụ, Amaghị m otu esi adị mkpa na weebụ ma chọọ enyemaka. SEO abụghị a iguzo onwe-ya ịchụso ọ dịkwaghị. Ọ bụrụ na ị nwere onye SEO gị na silo gaa n'akụkụ, akụkụ ọ bụla ọzọ nke ọnụnọ dijitalụ gị ga-ata ahụhụ. Ihe osise SEO nke Venn gafere ugbu a na ndị edemede, eserese, mmekọrịta ọha na eze, vidiyo na R&D. Phil Buckley, Curagami
Na iji isiokwu Meta tags bara uru ma ọ bụ Isiokwu njupụta. Were nhọta site na nke ọ bụla n’ime ndị a. Ihe mkpado Meta ahapụrụ uru ha nwere site na Google afọ ole na ole gara aga, ọ bụ ezie na ụfọdụ na-ekwu na ha nwere obere uru na Bing - mana ọ pere mpe. Nweta isiokwu njupụta nke oma na ibe bụkwa ihe ọzọ tụfuru uru niile afọ ole na ole gara aga, mana na e-mail spammy niile anyị nwetara site na ụlọ ọrụ 'mba' SEO ndị a, ha ka na-ekwu maka nke a. Ihe ị na-ejupụta na peeji nke jupụtara na isiokwu ugbu a, ị ga - eme ihe ọjọọ karịa mma. Andy Drinkwater, iQ SEO
Na ikwesighi akara ogo n'ihi na emeziri onwe ha onwe ha nke ubochi a na ndi ozo ikwenyeghi. Di na nwunye edeputara otutu SEO edeputara nke a ebe obu na enyeghi ya ka emeputara banyere ihe mere i gha aghagharia ha: ha n'ozuzu ha nyere nkowa di omimi banyere otu ị si eme na igwe nyocha. Ekwenyesiri m ike na ha, ọ na-enye gị nghọta dị ukwuu na ọnọdụ gị ugbu a n'ahịa ma na-enye anyị data bara uru na ndị nwere asọmpi ka anyị jikọtara nke a na mgbalị nyocha isiokwu anyị. Martijn Scheijbeler, Weebụ Ọzọ
na SEO bu ihe ichoro. E nwere echiche zuru oke na ị were ezigbo ụlọ ọrụ SEO ma ha ga-enyere gị aka ịme nde kwuru nde n'ime ọnwa na nke a bụ akụkọ ifo kachasị na ụlọ ọrụ anyị. Ekwenyere m na uto azụmaahịa na-adabere n'ọtụtụ ihe dị iche iche gụnyere ogo ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa, uru ahịa, mgbanwe ahịa, ahịa, ọrụ ndị ahịa na ndị ọzọ. SEO bu otu uzo ahia. Moosa Hemani, SEtalks
Ihe m na-ekwu mgbe niile nye ndị mmadụ ọhụụ na SEO bụ ikwenyeghi na nkwanye niile. Nke ahụ na-aga maka ịghara iwere okwu Google dị ka ozioma ma ghara ikwere ọ bụla SEO blog post ị gụrụ. Eziokwu bụ, imirikiti SEO blọgụ blọgụ na-ezu oke. Ọtụtụ bụ tiori, ọtụtụ bụ akụkọ ifo - ọtụtụ ndị na-ede blọgụ SEO amaghị mgbe ha ga-emechi ọnụ na ọtụtụ n'ime ha agaghị ama ịdị umeala n'obi ma ọ bụrụ na ọ wụliri wee kụọ ha na ihu (ị nwere ike ime ka uche gị dị elu na ma ị na-ahụ nke a dị ka ịkwa emo, ma ọ bụ meta).
Maka ndị nọ n'ụlọ ọrụ ahụ, echere m na Onye Ọdee akwụkwọ bụ akụkọ ifo, ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ ọtụtụ ndị na-ede blọgụ SEO kwenyere na ọ ga-arụ ọrụ. Ndụmọdụ m ebe ahụ ga-abụ izere mkpọtụ niile wee gaa gụọ ihe ndị dịka Bill Slawski na Mark Traphagen nwere ikwu n'okwu a - opekata mpe mgbe ahụ ị ga-enweta ezigbo ihe ọmụma ma ọ bụghị nkwubi okwu ọhịa. Tom Roberts
Na imirikiti ndị na-ekwu na ha ma ọ bụ ụlọ ọrụ ha bụ a ọkachamara SEO ụlọ ọrụ n'ezie bụ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụlọ ọrụ ndị na-azọrọ na ha nwere ihe ọmụma SEO nwere, nke kachasị mma, nghọta 10 ma ọ bụ 11% nke SEO. Robert Fisher, igba ahia ahia
Akụkọ SEO kachasị bụ ma eleghị anya ndị na-eche ịkwụ ụgwọ $ 1 nde na PPC ga-enyere aka mkpọsa SEO gị. James Norquay, Ọganihu Media
Akụkọ SEO kachasị ugbu a bụ nke ahụ SEO dị ndụ ma na-agbasi ike. N'ikwu eziokwu, ọ na-esiri ya ike ịdị irè na SEO karịa ka ọ dịbu. Daybọchị ọ bụla, SEO na-aghọ ọwa ahịa ahịa organic adịghị ike. Danny Dover, Lifelisted.com
Na ọ bụrụ na ị na-eme PR ma ọ bụ ahịa ọdịnaya ma nweta njikọ dị elu bara uru ga-abịa na-enweghị njikọ njikọ arịlịka. Ọ bụ naanị otu akụkụ nke SEO. David Konigsberg, Ezigbo Targeting
Azịza ndị a dị n’elu emechaala edezigharị maka nghọta doro anya na nkenke.
Tags: adWords emefuAndy Drinkwateronye edemedenwa okpuokpu ojii seocontent Marketingesemokwu seocuragamiDanny Doverdavid konigsbergdesignndebanye ahaama esịn ngalabaịgbà ahịakpomkwem egwuregwuzụọ botezigbo ọdịnayablogging ọbịana SEOiQ SEOJames Norquaydị ndụNdụLeeji.comnjikọ-ụlọikenofollownofollow njikọezigbo ezubere icheKacha elu na peeji nke sculptingpatrick sextonbunye marappcọkachamara seoMgbasa Ozi Ọganihuazu azurobert azụseo di nduseo anwuolaakụkọ ifoakụkọ ifousoro aghụghọseo na imeweSimon PensonTom robertsọdịnaya pụrụ icheabaghị uru seoZazzle
Kieran Wilson bụ Digital Marketing Manager maka Akpaghị Aka, nke na-adịbeghị anya ulo oru Wordsmith maka Marketing, ihe ngwa na-automates ahịa na-akọ maka dijitalụ ahịa ụlọ ọrụ. Ọkachamara na usoro ịzụ ahịa dijitalụ, ahia inbound, na nha na nyocha; Kieran na-ekwu ma na-ede banyere isiokwu ndị a ugboro ugboro. O wulitela ma tụọ ngalaba atọ azụmaahịa dị iche iche site na ala, gụnyere otu maka enyemaka Omnicom na otu maka ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi na-elekọta mmadụ.
Mgbasa akụkọ abụghị usoro aghụghọ - belụsọ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ
Aug 15, 2014 na 9: 40 AM
Akwa post Kieran! Daalụ maka ịkekọrịta ozi bara oke uru ịkekọrịta ebe a ..